युगसम्बाद साप्ताहिक - हजारौंलाई कालसंग खोस्ने डा. देवकोटा आफैं कालसंग लड्दै
Sunday, 04.05.2020, 03:40pm (GMT+5.5) Home Contact
हजारौंलाई कालसंग खोस्ने डा. देवकोटा आफैं कालसंग लड्दै
Tuesday, 05.08.2018, 11:01am (GMT+5.5)
नेपालको चिकित्सा क्षेत्रको एउटा नक्षत्र अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त स्नायु विशेषज्ञ डा. उपेन्द्र देवकोटा अहिले मृत्युसंग लड््दै हुनुहुन्छ आफैले स्थापना गरेको न्यूरो अस्पताल बाँसबारीमा । हजारौंलाई मृत्युको मुखबाट खोसेर ल्याउन सफल देवकोटा स्वयं मृत्युसग लडिरहनुभएको छ । नेपालमा मात्र हैन विश्वका नामी नामी अस्पतालहरुमा शल्यक्रिया गर्न पुग्ने डा. देवकोटा अन्तर्राष्ट्रिय चिकित्सक हुनुहुन्छ ।
पाँच महिना लामो बेलायतको उपचारले अब उपचार सम्भव नहुने भएपछि उहाँ आफ्नै माटोमा मर्ने निष्कर्षसहित काठमाडौं फर्कनुभयो । चिकित्साका साथै आध्यात्मिक, शैक्षिक र राजनीतिमा गहन अध्ययन गर्ने डा. देवकोटा आम नेपालीलाई सहज स्वास्य सुविधा दिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा हुनुहुन्थ्यो र शाहीकालमा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा उहाँले यसको खाका बनाउनुभयो । उहाँको खाका झण्डै डेढ दशकपछि गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री बनेपछि कार्यान्वयनमा आयो ।
डा. देवकोटा चुपचाप लण्डन गएको र अस्पताल भर्ना भएको समाचार बाहिरिए पनि उहाँलाई के रोग लागेको भन्ने यक्किन थिएन । उहाँ नेपालमा सम्भव हुने उपचार यही गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने डा. देवकोटाको लण्डनको उपचारले नै शंका जन्माइसकेको थियो कि उहाँलाई पक्कै निकै गम्भीर रोग लागेको छ । हुन पनि उहाँले स्वदेश फर्केपछि मैले साँचो बोल्नैपर्छ भन्दै आफ्नो रोग, उपचारको प्रयास र अहिलेको अवस्थाका बारेमा संचारकर्मीहरुलाई अवगत गराउनुभयो ।
हामीले देशसंचार अनलाइनले प्रकाशन गरेको डा. देवकोटाको पछिल्लो अनुभूतिलाई साभार गरेका छौं । डा. देवकोटाले आफू अस्वस्थ भएको कहिले र कसरी थाहा पाउनुभयो त ? उहाँको भनाई जस्ताको तस्तै–
“मेरो बेलायती न्यूरोसर्जन मित्र हेनरी मार्स ‘बेस्ट सेलर’ किताब लेखक पनि हुन् । उनलाई लिएर म बिहानै आफ्नै मोटरमा गाउँतर्फ लागें, १२ बजेतिर घर पुग्यौँ । म हिँड्नुअघि नै मामाको छोरा भाइलाई गाउँ पठाएको थिएँ आवश्यक व्यवस्था गर्न । घरबाट प्याक गरेको स्यान्डविच थियो हामीसँग । माया गरेर बियर पनि राखिदिएको रहेछन् फ्रिजमा । गोरखा लिगलिगबाट द्रव्य शाहको दरबारतिरको उकालो लाग्यौँ । हेनरी मभन्दा ३–४ वर्ष जेठा हुन् । उक्लँदा मलाई अलिअलि गाह्रो भो । म सहरिया भएछु क्यारजस्तो लाग्यो ।
माथि पुगेर ‘पिकनिक’ गरौँ भनेँ मैले हेनरीलाई । लोकल बियर निकालेँ अनि ३ सय ६० डिग्रीको सेरोफेरोमा दृश्यावलोकन र्गयौँ त्यहीँबाट । मर्स्याङ्दी, लमजुङ, चेपे, गोर्खा दरबार सबै वरिपरि । हेनरीलाई चिनाएँ ती दृश्यहरु । एक बोतल बियरबाट ५र७ घुट्का पिएपछि मन लागेन । हेनरीलाई पनि खासै रमाइलो लागेन । बियरको तर्पण दिएर ओर्लियौँ । यो उमेरमा ग्यास्ट्राइटिस राम्रो हैन । काठमाडौँ गएर इन्डोस्कोपी गर्न भने उनले । मलेखुमा उनलाई ‘ड्रप’ गरेर काठमाडौँ गएँ म । पाटन अस्पताल पुगेँ, रिपोर्ट अनौठो आयो । ग्यास्ट्राइटिस र हेलिको फ्याक्टर पोजिटिभ देखियो । उपचार सुरु भयो । मलाई फाइदा भएन, काम पनि गरिराखेँ । औषधि पनि खाइ राखेँ ।”
“त्यसपछि चुनावको रौनक थियो । गोरखाको चुनाव रमाइलो थियो । विभिन्न कारणले वामगठबन्धनको पक्षमा उभिने निधो गरेँ । करिब १० दिनपछि फेरि गोरखा गएँ । एकैदिन त्यस बेलाका पूर्व प्रधानमन्त्री र अहिलेका पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली, प्रचण्डजीसँग तीनओटा ¥यालीमा भाषण दिएर काठमाडौँ फर्किएँ । विद्यार्थी जीवनमा वादविवाद प्रतियोगितामा अक्सर पहिला हुन्थेँ । तर यता आएर भाषण दिने बानी हटेको थियो । राम्रै बोलेँ । थारो भैँसीलाई कुँडो ख्वाएर अनुत्पादक काम नगर्न आग्रह गरे सबैसँग । भाषणपछि काठमाडौँ फर्केँ तर धेरै थाकेँ । भोलिपल्ट हेनरी बेलायत फर्कँदै थिएँ । म तल झरेर ‘बाई’ भन्न सक्ने अवस्थामा पनि थिइन । बिहीबार दिनभरि आराम गरेँ । शरीर पलाएपछि अस्पताल गएर शुक्रबार अप्रेसन गरेँ ।”
“गोरखाकी एकजना १२ वर्षकी बहिनी थिइन् । उनको अपरेसन म आफै संलग्न भएर गर्नुपर्ने थियो । एक जना सहकर्मी डाक्टरको काम चित्त बुझेन । म ‘इरिटेट’ भएँ । तर, मैले सोचेँ, म यति ‘डिमान्डिङ’ र ‘इरिटेट’ हुने मान्छे हैन, यो मेरो चरित्र हैन । ‘समथिङ मस्ट बी रङ विथ मी’ भन्ने लाग्यो । ट्वाइलेट गएँ, पहेँलो बाक्लो पिसाब आयो । ऐना हेरेँ, आँखा पहेँला । ‘डीप जन्डिस’ लाग्यो । शंका पनि लाग्यो । मैले खाइरहेको ‘क्लेरिथ्रोमाइसिन’ को काम हो र त्यो औषधि सकिएपछि यो कम हुने आश पनि थियो । आफ्नै अस्पतालमा तल गएर एमआरआई र अल्ट्रा साउन्ड गरेँ । त्यो हेरेपछि छाँगाबाट खसेजस्तो भएँ ।”
“त्यो पहिला सोचेजस्तो कोलेस्टेटिक जन्डिस थिएन । पित्त नली थिचिएर अवस्ट्रक्टिभ जन्डिस थियो त्यो । भोलिपल्ट शनिबार एक्स्पर्ट मित्रहरु बोलाई कन्सल्ट गर्दा जटिल खालको कलेजोको भेट्नामा मासु पलाएको जन्डिस देखियो । नलीहरु ‘ड्रेन’ गर्न नसके २–४ दिनमै जीवनमा असर पार्नसक्ने अवस्था देखियो । मुलुकमा र यो क्षेत्रमा काम गर्नको लागि एक्सपर्टिज कहाँकहाँ छन्, छलफल ग¥यौँ । ढुक्क हुन सकिएन । तत्काल बेलायत फोन ग¥यौँ हेनरीलाई । उनले किंग्स कलेज हस्पिटलका चिफ सर्जन फ्रोफेसर नाइजल हिटनको नाम लिए । उनीहरु दुवै जनाको मित्रतासँगै एउटा विशेष भिडियो पनि रहेछ । हेनरीले भनेपछि मंगलबारको ‘अप्वइन्टमेन्ट’ निश्चित भयो । सोमबार काठमाडौँबाट उडेर मंगलबार नाइजललाई भेटेँ ।”
“म सँधै नै मुलुकभित्र सम्भव उपचार यहीँ हुनपर्छ र सक्नेले सरकारी ढुकुटीमा आँखा लगाउन हुँदैन भन्ने मान्यता राख्दै आएको व्यक्ति हुँ । मेरो केसमा पुष्टि भयो, यसको उपचार नेपालमा सम्भव थिएन । नाइजललाई भेटेको भोलिपल्टै उनले आफ्ना विभागका ५र६ जना ख्यातिप्राप्त ग्यास्ट्रो इन्टेरोलोजिस्टलाई बोलाए ।”
“बुधबार ह्यारिसनलाई सुकेको नलीमा ‘स्टेन्ट’ हाल्ने काम दिइयो । उनले एकातिर हाल्न सके, अर्कोतिर सकेनन् । त्यसपछिका डा. जोन डेभलिनले ‘टेक अप’ गरे । पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्रयास असफल भएपछि चौथो ‘सिटिङ’ मा स्टेन्ट त हाले तर वायोस्पी सम्भव भएन । अन्तमा पाँचौँ ‘सिटिङ’ मा भित्रै अल्ट्रासाउन्डपछि अत्यन्त ‘सोफिस्टिकेटेड’ प्रोसेसबाट बायोस्पी गरे उनले । वाइल डक्ट (पित्त थैली) क्यान्सर देखियो ।
“उपचार अत्यन्त जटिल छ, जाने बाटो एउटै छ । कोलोन्जियो कार्सीनोमाको स्ट्यान्डर्ड उपचार भनेको ‘किमो’ दिएर ट्युमरको साइज घटाउने अनि अपरेसन गरेर आधा लिभर फाल्ने । त्यसमा विशेषज्ञता हासिल गरेका डाक्टर पाल रस (क्यान्सर विशेषज्ञ) ले काम शुरु गरे ।”
“नोभेम्बर २१ मा बेलायत पुगी जनवरी २५ मा मात्र किमोको पहिलो डोज लिन पाएँ । सबै कुरा ढिलो हुन पुग्यो । किमोपछि ल्युकोपोनिया र कलेन्जाइटिससँग जुध्दै रहेँ । लढ्दैपढ्दै तीन साइकल किमो लिन पाएँ । तर, मेरो ट्युमर बढ्दै गएको देखियो । पाल अलि निराश देखिए उनको उपचारले रेस्पोन्ड नगरेकामा ।”
“सिटी स्क्यान गर्दा ट्युमर फैलिएको देखियो । त्यो दुःखद थियो । फस्ट लाइन किमो प्रभावकारी नभएमा सेकेन्ड लाइन किमो पनि त्यत्ति प्रभावकारी हुँदैन । रेडियोथेरापी त्यत्ति प्रभावकारी नहुँदा सर्जरी नै गरिन्छ । रेडिएसनमा किरणले आन्द्राहरु सुकाउँछन् । त्यहीँ नै बसेर उपचारलाई निरन्तरता दिनुको अर्थ थिएन ।”
“किमोले रेस्पोन्ड नगर्ने रेडियोथेरापीको साइड इफेक्टमात्र हुने र सर्जरी गर्न नमिल्ने विचित्रको अवस्थामा थिएँ म । खासै कुनै उपाय नभएको अवस्थामा एक्सपेरिमेन्टल ट्रिटमेन्ट गरेर बस्नुभन्दा समयमै देश फर्केर बाँकी जीवन तपाईँहरु सबैबीच बस्ने निधोका साथ फर्केँ ।”
“निको नहुने रोग लाग्दा के गर्ने? म स्वयम् चिकित्सक हुँ । मेरो व्यक्तिगत धारणा के हो भने जब निको नहुने रोग लाग्छ त्यसबेला अनावश्यक उपचारमा लाग्नुभन्दा शरीरमा केही शक्ति हुँदासम्म काम गर्नु उत्तम हुनेछ । त्यही मान्यताका साथ किमोबाट थप जटिलता निम्त्याउनुभन्दा बाँकी जीवन मेरो आफ्नै देशको माटो हावापानीमा बिताउने निधो गरेँ । दाजुभाइ दिदी बहिनीहरुकै समिपमा ।”
“मेरा आफ्ना अनुभव र उपलब्धीहरुले अरुका लागि के अर्थ राख्लान् मलाई थाहा छैन । तर मलाई मेरो हावा पानी माटो र तपाईँहरु सबै अत्यन्त प्रिय हुनुहुन्छ । त्यसैले म केही बोल्ने प्रयास गर्नेछु ।”
“म फेरि सायद बिरामीहरुका सेवामा फर्कन सक्ने छैन तर जति बाँच्छु उहाँहरुप्रति सद्भाव र शुभकामना राख्नेछु । मेरा अनुभव र भनाइ राख्दै जानेछु ।”
मृत्यु अवश्यंभावी छ । गीतामा पनि भनिएको छ, ‘जातस्य ही ध्रुबो मृत्यु‘ ।’ अर्थात जन्मपछि मृत्यु निश्चित छ ।”
वास्तवमा मर्नु आफैँमा ठूलो कुरा हो । मर्ने व्यक्तिले उसलाई सम्झने के कुरा बाँकी छाडेर जान्छ यो लोकमा त्यसले महत्व राख्छ । पाँच महिनाअघि निको भएर फर्किने आसका साथ लन्डन गएँ । तर फर्केर त्रिभुवन विमानस्थलमा ल्यान्ड गरेपछि महसुस गरें– पाँच महिनाअघि जाँदाको उद्देश्य रोगमुक्त भई स्वस्थ भएर फर्किने थियो भने फर्केर आउँदाको उद्देश्य नितान्त फरक थियो । मुलुकमै प्राण बिसाउँ, यही निर्णायक चाहना बन्यो । मातृभूमिको हावा, पानी, माटो र आफन्तहरुको अनुहार मात्र अगाडि थियो ।”
“अप्रिल २८ प्लेनबाट उत्रँदा (वैशाख १५) एयरपोर्टमा एम्बुलेन्स गएको थियो मलाई लिन । हल्का पानी परिरहेको थियो । एयरपोर्टको भूमिमै माटोको चन्दन लगाएँ । यो देशको माटो मलाई अत्यन्तै प्रिय छ । र, त्यसैले प्रेरित भएर फर्किन पाएकोमा म अत्यन्त खुशी पनि छु । एम्बुलेन्सबाट बाँसबारीस्थित आफ्नै न्यूरो अस्पताल ल्याइयो– साथीहरुको आत्मीयता माझ । उहाँहरु मप्रति अत्यन्त समर्पित हुनुहुन्छ, सबै सुविधा दिइरहनु भएको छ । कमिटी मिटिङहरु, अनि मेरो ट्रिटमेन्टमा उहाँहरु जुट्नुभएको छ । म अत्यन्त सन्तुष्ट छु । ममा अहिले केही शक्ति सञ्चय भएको लागिरहेको छ । हेरौं कति रहन्छ ।
“फर्किएको थाहा पाएपछि थुप्रै शुभचिन्तकहरु भेटघाटका लागि आउनुभयो । कतिलाई भेट्न सकें, कतिलाई सकिनँ । उहाँहरुको सद्भावप्रति म अत्यन्त अनुग्रहित छु । उहाँहरुको माया पाएकोमा म खुशी छु । आखिर म फर्किएको पनि त त्यसैका लागि हो । परिवारबाट अपेक्षित व्यवहार पाइरहेको छु । विभिन्न क्षेत्र र आफ्नै प्रोफेसनका मित्रहरुको माया पाउँदा जिन्दगीमा केही गर्न सकेछु जस्तो लागेको छ । अझ बिरामीहरुको सद्भाव र उहाँहरुबाट आएको टेलिफोनका लागि म कृतज्ञ छु ।”
“म गाउँबाट आएको सामान्य व्यक्ति हुँ । तर अहिले पाएको सद्भावबाट सिंगो नेपाल मेरो र म सबैको भएको रहेछु जस्तो पनि लाग्न थालेको छ । अस्पतालबाटै आफ्नो बाल्यकाल, स्कुले जीवन र त्यसबेलाका विभिन्न गतिविधि नियाल्न थालेको छु । फर्किएको थाहा पाएपछि थुप्रै शुभचिन्तकहरु भेटघाटका लागि आउनुभयो । कतिलाई भेट्न सकें, कतिलाई सकिनँ । उहाँहरुको सद्भावप्रति म अत्यन्त अनुग्रहित छु ।”
“म पहाड गोर्खाको पण्डित गाउँमा जन्मेँ, हुर्केँ । मेरा पिताजी सरकारी सेवामा हुनुहुन्थ्यो, कविराज । कमै मान्छे सरकारी सेवामा हुने गर्थे त्यसबेला । म उहाँको तेस्रो छोरा । पिताजीको जगजगी थियो । दुई दाजुहरु मभन्दा ८ र १० वर्ष जेठो हुनुहुन्थ्यो । पिताजीले आफ्ना भानिज भाइलाई गुरु बनाएर राख्नुभएको थियो । वास्तवमा हाम्रो घर नै पाठशाला बनेको थियो । मेरो पढ्ने उमेर भएपछि अंग्रेजी पढ्ने कि संस्कृत, विवाद देखा प¥यो । फर्केर हेर्दा लाग्छ, मेरो पिताजी संस्कृत नै पढाउनेमा हुनुहुन्थ्यो । २०१५ तिर म पढ्ने उमेरको हुँदा अंग्रेजी स्कुल पनि खुल्यो गाउँमा । अब गाउँका समकालीन साथीहरु ‘मिसन स्कुल’ गएर अंग्रेजी पढ्न थाले । म गाउँमै अमरकोष घोक्न थालेँ । पिताजी मलाई शास्त्री, आचार्य बनाउन चाहनुहुन्थ्यो । दाइहरुले पनि संस्कृत नै पढ्नुभयो ।
म पनि थाहै नपाई त्यत्तै जाँदै थिए । दुई वर्षपछि मेरो आमाले अंग्रेजी स्कुलमा लैजानुभयो भर्ना गर्न मलाई । एकैपल्ट कक्षा दुईमा । २०१७ तिरको कुरा हो यो । ६ महिनामै दुईबाट तीनमा गएँ र अर्को ६ महिनामा ४ मा । फस्र्ट हुनेलाई डबल प्रमोसन दिइन्थ्यो । चारमा पनि फस्र्ट भएपछि पाँच कक्षाका लागि ‘लुँइटेल’ जानुपर्ने हुन्थ्यो । जंगलको बाटो, टाढा, म गाउँमै चार कक्षामै रहेँ । तीन महिना रोकिँदा एक वर्षको फरक पथ्यो । अहिले सोच्छु, त्यसैबेला माथिल्लो क्लासमा ‘लुँइटेल’ पुगेको भए ?